असक्षमताको पदवीले विभूषित देउवाले फेरि पनि असक्षमता प्रदर्शन गर्दैछन् : दिलभूषण पाठक (भिडियो)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अढाई महिना बितिसक्दा पनि सरकार गठन गर्न नसकेपछि चौतर्फी आलोचना खेप्नु परेको छ । प्रतिपक्ष ले यसैपनि अदालतको आदेशले अर्थात परमादेश बाट बनेको सरकार भनेर डंका फुकेकै छ भने जनस्तरबाट पनि सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।
अब त हुँदा हुँदा सिंहदरबारमा मन्त्रीको खोजी भन्दै संचार माध्यम हरुमा समाचार आउन थालेका छन् । कहाँ अल्मलिए प्रधानमन्त्री देउवा ? के रोक्यो सरकार विस्तार गरेर राज्यसंचालन गर्न ? पाँच मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीको भरमा सधै चल्छ त देश ? यावत प्रश्नले घेरिएका छन् यति बेला देउवा ।
आफ्ना आसेपासे र चाकडीबाज ९ सय भन्दा धेरैलाई पदक बाड्न भ्याउने अघिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका राजदुत नियुक्ती फिर्ता देखि अन्य निर्णय खोजी खोजी उल्याट्याउ फुर्सद हुने हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारले नगरी नहुने काम गर्न के ले रोकेको छ ?
कांग्रेस पार्टीको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री भएका देउवाको कांधमा दुईभारी जिम्मेवारी छ तर भारी बोकेका उनको कार्यशैली भने बुझिनसक्नुको छ ।
मंसिरमा तोकेको महाधिवेशनको मिती नजिकिदै गर्दा र तपाईले साढे पाँच वर्ष नेतृत्व गरेको कांग्रेसको अवस्था लथालिङग छ । समयमा कहिलै महाधिवेशन गर्न नसक्ने आफ्नै पार्टीको क्रियाशिल विवाद समाधान गर्न नसक्ने तपाई कस्तो योग्यता भएको नेता ?
कस्तो सभापति ? अनि कस्तो प्रधानमन्त्री ? अहिलेको सत्ताप्राप्ती सायद तपाईले पनि नसोचेको लड्डु जस्तै हो । ३० वर्ष अघि गृहमन्त्रीको रुपमा प्रवेश गरेर पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बिगतमा लागेको असक्षमको दाग मेट्न ठूलो अबसर थियो तपाईलाई ।
तर प्रधानमन्त्री ज्यु यतिका दिन सम्म बितिसक्दा तपाई कहाँ हुनुन्छ ? मुलुकलाई अघि बढाउने यो अबसर सदुपयोग गर्न तपाईलाई के अफ्ठ्यारो परो ?
सत्ता गठबन्धनका कारण समस्या भएको हो भने खुलस्त भन्नु पर्यो, पाँच दलिय गठबन्धका स्वास्थहरुनै यो देश र जनताका सरोकारका विषय हुन् त ?
तपाईको बुझाई के हो ? बरु देश र जनतालाई सार्बजनिक गरेरै भन्नुस् राज्य संचालनमा तपाई कहा हुनुन्छ र के गर्दै हुनुन्छ ?